Rivo Rakotovao, nandritry ny fanotronany kaongresy iray momba ny fitsaboana tetsy amin’ny Panorama Andrainarivo. Efa nisy foana, hoy izy, ny resaka fa tokony hizotra any amin’ny fanarahan-dalàna isika. Tsy midika akory izany fa hanampin-tsofina amin’ny soso-kevitra sy ahiahy ny fanjakana. Iaraha-mahalala, hoy ny tenany, fa misy amin’ireny fangatahana ireny no tsy azo tontosaina anaty fotoana fohy. Lavitra ezaka ny hanova lalàmpanorenana ka aleo hifidy aloha ny vahoaka fa tsy izany no ialantsika amin’ny fanarahan-dalàna, hoy hatrany ny filoha Rivo Rakotovao.